Tababarka Photoshop: Dhagaxa Qoraalka Qoraalka I | Abuurista khadka tooska ah
Tababarka Photoshop: Dhagax Qorista Qaybta I
Fran Marin | | Photoshop, Tababarada
Markaad fulineyso mashruucan, waa inaad tixgelisaa muhiimadda ay leedahay dukumiintiyada isha. 50% shaqadan waxay ka kooban tahay xulashada labada sawir ee aan adeegsan doonno. Waxaan isticmaali doonaa laba sawir: Sawir qof iyo sawir farshaxan. Shaqadayada qoraal-qorista farsamo ahaan marka laga hadlayo waxay noqon kartaa mid aad u wanaagsan, laakiin haddii labadaas sawir aysan si fiican u dhigmin ama aysan ahayn kuwa ugu habboon, waxay u badan tahay in xitaa haddii farsamadu hagaagsan tahay, natiijada aysan ku habboonayn waxa aan raadineyno. Marka waxaan kugu dhiirigelinayaa inaad ku bixiso dadaal badan ama ka badan sidii aad ku heli lahayd labadaas sawir ee ugu habboon sidii farsamooyinka isku dhafka iyo isdhexgalka. Maxaan xisaabta ku dareynaa markaan xulaneyno labada sawir ee aan ku shaqeyn doonno?
Waa inuu ahaadaa laba sawir a baaxad weyn iyo qeexitaan.
Xagasha oo labada sawir laga soo qaado waa inay la mid noqotaa. Sidoo kale, booska aktarkayagu waa inuu u ekaadaa sida ugu macquulsan booska sawirka.
Timaha waa arrin muhiim ah. Labada astaamoodba waa inay lahaadaan timo la mid ah sida ugu macquulsan. In timaha sawirka loogu badalo timo farshaxan waa wax aad u adag, sidaa darteed waa inaan isku daynaa inaan ka faa'iideysano dhamaan ama timaha ugu badan ee suuragalka ah ee farshaxankeena.
Markan waxaan abuuri doonaa buste. Waxaan adeegsan doonnaa sawirka Tom Cruise iyo farshaxanka riwaayadda riwaayadda Griigga ee Menander.
Tallaabada ugu horreysa waxay ka koobnaan doontaa soo dhoofso farshaxankeenna oo u jar sida ugu saxsan, Waxaan u adeegsan karnaa qalabka xulashada iyo jarista ee aan jecelnahay, xuduudaha tiradeena waa in si aad u wanaagsan loo qeexaa, xinjirooyin xun ayaa runta ka xadaya kulankeena.
Marka tan la dhammeeyo, waxaan soo dejin doonnaa sawirka Tom Cruise, xoojin doonaa lakabka iyo waxaan hoos u dhigi doonaa mugdi ah 50%. Waxa na xiiseynaya ayaa ah inaan awoodno inaan aragno labada lakab si aan u awoodno inaan u qaadanno qodobbada istiraatiijiyadeed ee wajiga Menander tixraac ahaan. Marka mugdiga la beddelo waxaan bilaabi doonnaa inaan beddelno sawirka Tom, (Ctrl / Cmd + T + Shift) waxaanan hubin doonaa in labada astaamoodba ay isku miisaan yihiin, oo tixraac ahaan u qaadaneyno indhaha, sanka, afka iyo dhegaha. Waxaan arki karnaa in jihada indhaha loo rogay labada astaamood. Marka xigta waxaan ku rogi doonnaa sawirka dusha sare (Wax ka beddel> Wax ka beddel> Is-beddel Flip) si astaamahoodu isugu xidhan yihiin oo astaamuhu u midaysan yihiin. Waxaa muhiim ah in labada sawir ee aan adeegsano ay aad isugu egyihiin sababahan awgood. Haddii kale, waxaan beddeli lahayn astaamaha dabeecadeena oo waayi lahayn xaqiiqda.
Waxaan abuuri doonnaa a maaskaro lakabka sawirka Tom iyo wata a burushka midabka hore ee madow oo yaraaday waxaan bilaabi doonnaa inaan ogaanno farshaxanka. Waxa kaliya ee aan rabno inaan ka ilaalino Tom waa wejigiisa. Indhaha, sanka, afka, dhabannada iyo malaha garka.
Marka tan la sameeyo, waan soo celin karnaa 100% daahnaan wejiga Tom oo markaa hubi natiijada. Waqti kasta waan tafatiri karnaa cabirka iyo booska wejiga iyo maaskaro lakabka ah, marka haddii uusan hadda fiicnayn, ha ka welwelin.
Hadda waxaan bilaabi doonnaa ka shaqeynta maqaarka. Sidaad ogtahay, heerka fiiqitaanka ee sawir-xallinta sare na siinayo ma laha barbardhig lagu barbardhigi karo heerka faahfaahinta uu farshaxanku bixin karo. Waxa ay tahay inaan hadda sameyno waa inaan kala dirno ama jilcino dhammaan faahfaahintaas, abuurno qaab isku dheelitiran oo isku dhafan oo si dhammaystiran ula socda dhagaxa. Waa inaan ka shaqeynaa godadka, duuduubyada, gaar ahaan sunnayaasha, baarkooda, timaha wajiga ah ee dhici kara iyo ilkaha, tan awgeed waxaan ku xulan doonnaa aaladda Carta oo leh a 30% xoojin.
Si loo bilaabo in la isku daro labada cunsur ee ereyada chromatic, waa inaan ka faa'iideysanaa saameynta High Pass ee lakabka Tom. Waan gujin doonaa Sifeey> Kale> Baas Sare. Waxaan ku siin doonaa isbadal ah 270 pixels, inkasta oo ay tahay inaad maskaxda ku hayso in qiimahani uu ku xirnaan doono sawirka aan ka shaqeyneyno iyo astaamahiisa. Natiijadu waa xoogaa haawis iyo muuqaal liidata. Waxaan bilaabi karnaa inaan aragno hadda, sida saameynta midowga ay u dhaceyso si tartiib tartiib ah. Taas ka dib, waa inaan aadno Sawir> Isku hagaajin> Iftiin iyo isbarbar dhig kuna mari isla lakabka. Qiyamyada aan u adeegsan doonno kiiskan ayaa noqon doona -24 dhalaalka iyo 100 isbarbar dhiga. Iyada oo tan la adeegsanayo, isbarbar dhiga iyo hooska ayaa la calaamadeyn doonaa oo kufilan oo isbadalka sunnayaasha ayaa istaagi doona, tusaale ahaan, wax aan gadaal kaamil noqon doonno.
Waxa xiga ee aan samayn doonno waa inaan aadno aaladda Isbuunyo oo riix xulashada Quus. Sida aan aragno, waxaa jiray goobo midab leh, qalabkan waxa aan sameyn doonno ayaa ah inaan quusinno meelaha nasashada si kor loogu qaado isku dhafka iyo midowga. Waa inaan ku saameynaa wajiga oo dhan feejignaan ku filan, xusuusnow, farshaxanadu waa cawl yihiin.
Sida aad u aragto aagga baarkooda iyo sunnayaasha weli lama rumaysan, qaybta labaad waxaan ku sifeyn doonnaa aagaggaas oo aan abuureynaa muuqaal macquul ah.
Wadada buuxda ee maqaalka: Hal-abuurka internetka » Qalabka Naqshadeynta » Photoshop » Tababarka Photoshop: Dhagax Qorista Qaybta I
10 Saamaynta Qoraalka ee Photoshop | 2014
10 waxyaabaha muhiimka ah ee Photoshop